Abavelisi beziseko zophuhliso kunye nababoneleli - China iZiseko zophuhliso
I-Cantilever Form Traveler sesona sixhobo siphambili kulwakhiwo lwecantilever, olunokwahlulwa lube luhlobo lwe-truss, uhlobo oluhlala intambo, uhlobo lwentsimbi kunye nohlobo oluxubileyo ngokwesakhiwo. Ngokweemfuno zenkqubo yokwakha ikhonkrithi yecantilever kunye nemizobo yoyilo yeFom Traveler, thelekisa iintlobo ezahlukeneyo zeempawu zeFom Traveler, ubunzima, uhlobo lwesinyithi, itekhnoloji yokwakha njl.njl. indibano kunye nokudibanisa ukuya phambili, ukusetyenziswa kwakhona okunamandla, amandla emva kweempawu zokumila, kunye nendawo eninzi phantsi kweFom Traveler, imisebenzi emikhulu yokwakha ephezulu, efanelekileyo kwimisebenzi yokwakha ifomwork yentsimbi.
Eyilwe kwaye yaphuhliswa yinkampani yethu, itroli yetreyini yesanti kubunzulu baphantsi yinkqubo efanelekileyo yokwenza ulungelelwaniso lololiwe kunye neetonela zendlela.
Injini kunye nenkqubo yamandla ombane, idrayivu eyi-hydraulic. Sebenzisa amandla ombane ukusebenza, ukunciphisa ukukhutshwa komsi kunye nongcoliseko lwengxolo, kunye nokunciphisa iindleko zokwakha; Amandla e-chassis anokusetyenziselwa isenzo esingxamisekileyo, kwaye zonke iintshukumo zinokuqhutywa ukusuka kwisitshixo samandla esisisisi. Ukusebenza okunamandla, ukusebenza okufanelekileyo, ukugcinwa okulula kunye nokukhuseleka okuphezulu.
Ipetroli yombhobho wetololi yitonela elakhiwe phantsi komhlaba esixekweni, elidibanisa igalari yemibhobho yobunjineli efana namandla ombane, unxibelelwano ngomnxeba, igesi, ubushushu kunye nonikezelo lwamanzi kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi. Kukho izibuko lokuhlola elikhethekileyo, ukuphakamisa izibuko kunye nenkqubo yokubeka iliso, kunye nocwangciso, uyilo, ulwakhiwo kunye nolawulo lwenkqubo yonke idityanisiwe yaphunyezwa.
Iibhokisi zomsele zisetyenziswa kumsele wamatye okombiwa njengendlela yokuxhasa umsele wamanzi. Banikezela ngenkqubo yokufaka umsele ongenakufikeleleka ngexabiso eliphantsi.
Isithuthi sokufaka i-arch senziwe nge-chassis yemoto, ngaphambili nangaphandle, isakhelo esisezantsi, itafile yokutyibilika, ingalo yoomatshini, iqonga lokusebenza, isigunyaziso, ingalo encedisayo, ukuphakamisa i-hydraulic, njl.
Kwiminyaka yakutshanje, njengoko iiyunithi zokwakha zinamathela kubaluleko kukhuseleko lweprojekthi, umgangatho, kunye nexesha lokwakha, iindlela zokwemba zemveli kunye nokumba azikhange zikwazi ukuhlangabezana neemfuno zokwakha.
Ibhodi engenamanzi / itroli yomsebenzi yeRebar zibalulekile kwiinkqubo kwimisebenzi yetonela. Okwangoku, umsebenzi wezandla oneebhentshi ezilula uqhele ukusetyenziswa, ngoomatshini abaphantsi kunye nezinto ezininzi ezinengxaki.
Itonwork formwork luhlobo lwefomwork yohlobo oludibeneyo, oludibanisa iifomati zodonga oluphosiweyo kunye nolwakhiwo lomgangatho we-cast-in-place kwisiseko sokwakhiwa kwefomwork enkulu, ukwenzela ukuxhasa i-formwork kube kanye, tie ibha yentsimbi kube kanye, kwaye uthele udonga kunye nefomathi imilo kube kanye ngexesha elinye. Ngenxa yobume obungaphezulu kwale formwork bufana netonela elixande, ibizwa ngokuba yi-tunnel formwork.